"25/03/2020 Numero 14 per u - Page 79 of 98 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
Wixii macluumaad dheeraad ah oo
updates booqasho www.covid19.gov.mt
Ururka Malta shaqeeyayaasha The ‘ayaa sheegay in baakada of tallaabooyin maaliyadeed oo soo bandhigay dowladda waa
mid ka mid ah kaalmo dhaqaale wanaagsan iyo natiijada wada tashi wadajir ah. Rugta Dhanka Ganacsiga
ayaa sheegay in ay ka dheregsan yahay tallaabooyin si ay u caawiyaan ganacsiga ugu dhacay Covid-19, halka ammaanaya ruuxa
of dialgoue oo xukuumadda ku daray in arrintan. Malta Chamber of SMEs shaaca ka qaaday in kuwan
tallaabooyin siin doonaa nolosha ah in ganacsiga ee u baahan si ay u ilaaliyaan kartaa shaqo. The Gozo Business Chamber
iyo Gozo Association Dalxiiska ayaa sheegay in ay dhiirigelin lacageed siin muhiimadda ay leedahay in ay xaalado gaar ah
saamaynaya shirkadaha Gozitan. Hotels iyo Makhaayadaha Association Malta ayaa amaanay furitaankii Ra’iisul Wasaaraha ayaa
in ay arkaan in dalxiiska waa in jago in ay ka gudbaan caqabadaha ay keenayaan Covid-19. Shaqaalaha Guud
Midowga Dhanka kale sheegay in tallaabooyinka loo hubiyo in mushaharka ugu yar ee loo ballan qaaday kuwa ka shaqeeya inta badan ku
qaybaha ay dhibaatadu saameysey.
Ficil celin qabitaan ah THE
DAWADA OF CABIRKA LACAGEED
Tabarruc bangiyada ‘
The Bank of Valletta dhawaaqay taageerada tallaabooyinka loogu talagalay macaamiisha ay kuwaasi oo ay saameeyeen xaaladda dhaqaale
keenay oo ku saabsan by Covid-19. BOV ayaa darsigii ah oo aan ka yarayn 3 bilood ee caasimadda iyo sidoo kale on
xiisaha taas oo labada waxaa loo isticmaali doonaa, waayo, amaahda guryaha iyo daymaha shakhsiga ah. xadka ee overdraftiyada iyo kaararka deynta
iyada oo aan dacwado dheeraad ah ayaa kor u kacay. Charges on jadwalka cusub ee amaahda guryaha iyo daymaha shakhsiga ah ahaayeen
sidoo kale laga saaro, sida ay leeyihiin eedeeyay on dheeraad ah ee soo bixid iyo sida loo isticmaalo goobaha credit.
19 xaaladood oo cusub oo Covid-19 ah ayaa la xaqiijiyay in 24-kii saac ee la soo dhaafay. 8 ka mid ah kiisaska la xiriira dibada u safraan,
4 kuwaas oo hore u lahaa xiriir la shakhsiyaadka qaba fayraska kuwaas oo mar hore la soo ogaado by
maamulka caafimaadka, halka 7 ayaa qaba cudurka iyada oo la isugu gudbiyo maxaliga ah, iyadoo isha fayruska aan weli
hubsaday. Ka mid ah, kuwaas oo xaaladaha cusub ee uu jiro qof waayeel ah oo 81 sano kuwaas oo ilaa iyo haatan uma muuqato in ay
waxay leeyihiin dhibaatooyin. Qofka kale ee dadka waayeelka ah ee 61 sano ayaa weli at ITU, laakiin ma aha in Marxalad adag.
Tirada guud ee dadka ilaa iyo haatan ayaa laga heley virus hadda waa 129.
Tirada baaritaano suuf ayaa dedejisay in si ay u aqoonsadaan kuwa leeyihiin virus iyo inay meel ku go’doomiyaan
iyaga isla markiiba si loo yareeyo faafidda. Laga bilaabo shalay, shaybaar cudurada ee Mater ah
Hospital Dei bilaabay qaadashada dheecaanka afar naadi waqtiga kala duwan inta lagu jiro maalinta halkii saddex, sida
dhaqanka hore. Dhab ahaantii, in 24-kii saac ee la soo dhaafay, 488 iyo dheecaanka loo qaaday. hadhaagii Malta ka mid ah waddammada
taas oo qaadataa ugu dheecaanka ugu, iyo ilaa hadda 3.819 laga soo qaatay: oo ka mid ah, 2.605 ayaa laga soo qaaday dadka
bandhigaya calaamado iyo 1,218 ayaa la soo qaatay dadka ayaa la dhigey cusbitaalka la neefsanayo
dhibaatooyinka. Tirada xaaladaha wanaagsan ka imtixaanka sida ku xiran kasta iyo mid kasta oo inaga mid ah. Waxaan u baahanahay inaan
wada shaqeeyaan si ay u ma sii labanlaabi faafidda coronavirus ah.
Dheecaanka IYO TIJAABO
Cuntada iyo aagagga la cabbo sii logu xeerarka soo rogeen ku dul sii
xidhay si faafidda Covid-19 in la dhimay. In 24-kii saac ee la soo dhaafay, 800 oo kormeer la fuliyey
baxay Malta iyo 150 kale oo Gozo. No mid ka mid ah lagu qabtay jebinta xeerarka kuwan. hadhaagii racfaanka
in iskaashiga, labadaba ka macaamiisha iyo dadweynaha in ay ma congegrate hore ee qaadataan-iska
shirkadaha, laakiin in meel fog. Waxaad soo sheegi kartaa xadgudubyada on 21692447.
Kormeerka ON HOOS KUWA
Police The, wada Masuuliyiinta Caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan Waaxda Ilaalinta Rayidka ah,
sameeyay 329 kormeerka ee Malta iyo Gozo. Inta lagu jiro kormeerka, kuwaas oo, hal qof oo la qabtay
sharciga jabiyay ayaa lagu ganaaxay. Sida abid, hadhaagii racfaanka in qof masuul ka noqon waa iyo
iskaashi la dardaaranka ah in la soo saaray maamulka.
25981000 – Waayo, kuwa qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan waaxda waxbarashada iyo
saamaynta coronavirus ah
21692447- Waayo, milkiilayaasha hoteelada iyo dalxiisayaasha qaba su’aalo ku saabsan
tallaabooyin ku dhawaaqday.
25903030 – Waayo, dadka waayeelka ah wiiqay taageero u baahan daawooyinka, diyaar-dhigay
cuntada ama cuntada (miro iyo khudaar).
25469111 – Waayo, kuwa ka shaqeeya warshadaha ciyaaraha ka.
21411 411 – Waayo, kuwa karantiil khasab ah kuwaas oo u baahan raashin ah
cunto iyo daawo
144 – Kuwa u baahan tahay macluumaad ku saabsan tallaabooyinka dhaqaale
maamula Malta Enterprise.
153 – Kuwa u baahan tahay macluumaad ku saabsan tallaabooyinka dhaqaale
maamula Waaxda Social Security.
2204 2200 – Waayo, dadka deegaanka Malta oo lagu qabtay mid ka mid ah khatarta sare leh
dal iyo u doonayo in soo laabtay Malta
111 – Kuwa dareemaan calaamadaha COVID-19 ama raba macluumaad dheeraad ah